Nchịkọta pesti | Onye ọrụ ubi na-elekọta anụ ọhịa | February 2020
Atiya Nchịkọta pesti
Otu esi ewepu ahihia May
Na-ekpo ọkụ, na ala na e nwere ọtụtụ ụmụ ahụhụ dị iche iche. Ọtụtụ n'ime ha na-eweta uru doro anya: pollinate na ịzụlite osisi. Ma ụfọdụ n'ime ha na-eme ihe ọjọọ karịa ezi. N'etiti ụmụ ahụhụ ndị dị otú ahụ, Khrushka na-arụ ọrụ pụrụ iche. Iji belata mmebi nke ebe a, ị ga-achọ ịma ihe mgbochi ndị dị irè, na ka a na-eduzi gị iji mee ya.
Ntak emi ọtọn̄ọde ke odo odo, nte ikpanamde lily ke udọn̄ọ ye udọn̄ọ
Ọtụtụ gardeners na-akụ lilies na ha plots. Ịhụnanya ya maka ụzọ dị mfe isi bịa na nlekọta dị mfe. Ma echefula banyere atụmatụ nke agrotechnics nke agba ndị a. Ọ bụrụ na ị na-ahụ ọnọdụ nke kụrụ ma na-elekọta, lily agaghị arịa ọrịa ma ọ bụ pests. Atụmatụ lilies okooko Lily - bụ osisi perennial, ma ka ọ bụrụ oge ntoju kwa afọ, ị ghaghị ịghaghachi ya kwa afọ atọ.
Ọrịa na pests nke spathyphilum, otu esi enweta "obi ụtọ nke nwanyi"
Ndị nne na nna na-enwe mmasị na Spathiphyllums, ebe ọ bụ na okooko osisi ndị a anaghị adọrọ mmasị, ha nwere ike itolite na ebe a na-agbanye n'ọhịa ma n'otu oge ahụ ka ga-enwe mmasị na nnukwu okooko na okooko osisi mara mma. Ma ihe a niile ga-aga n'ihu ruo mgbe ihe mgbochi ọrịa ma ọ bụ ihe mgbaàmà ọzọ nke ọrịa ahụ na-apụta na epupụta nke spathiphyllum, nke a ga-emeso ya ozugbo.
Rudbeckia perennial: atụmatụ nke nlekọta
Perennial Rudbeckia bụ osisi magburu onwe ya nke ezinụlọ Astrov. O sitere na North America. Ifuru dị otú ahụ ga-abụ ihe atụ dị mma na akwa akwa ọ bụla, ọbụnadị ọhụụ na floriculture nwere ike ịgbaso iwu nke nlekọta. Ị ma? Rudbeckia nwetara aha ya na-asọpụrụ ndị na-azụ ihe ọkụkụ si Sweden, bụ Olof Rudbek (bụ onye chọpụtara usoro ọgwụ lymphatic nke mmadụ) na nna ya.
Brussels na-epulite: kụrụ, na-elekọta, uru
N'isiokwu a, anyị ga-akụziri gị otu esi akụ ahịhịa na Brussels. Ka anyi gwa gi ihe ala kwesiri ibu na otu uzo o choro iji mee ka osisi a di. Ọ bụghị naanị na ị ga - amụta ihe ọhụrụ, kama ị ga - amụtakwa ihe ole na ole na - adọrọ mmasị banyere kabeeji. Ị ma? Karl Linney mbụ ndị ọkà mmụta sayensị kọwara na kabeeji, na-akpọ ya Brussels mgbe Belgian gardeners si Brussels.
Nzuzo nke na-eto salvia
N'isiokwu a, anyị ga-ekwu banyere salvia na ụdị ya, mụta ụzọ isi mụbaa na ilekọta osisi ahụ. Anyị na-amụta otú e si ewepụ pests nke salvia na ọgwụ ọgwụ nke osisi a. Ị ma? Salvia (Salvia) sitere Latin ka a sụgharịrị dịka "ịkwalite ahụ ike". Aha ọzọ maka sage bụ salvia.
Isi nuances nke nlekọta tradescantia
Ogige tradescantia bụ osisi na-eto eto nke na-etolite nnukwu osisi shrub. Ọkụ nke osisi ahụ na mmalite nke oge vegetative bụ ogologo, mgbe ahụ, ha daa. Akwụkwọ nwere ike iru 21 cm. Okooko osisi Tradescantia na-abụkarị okooko osisi na-acha anụnụ anụnụ ma ọ bụ na-acha anụnụ anụnụ, nke dị ngwa ngwa.
Na-akụ ma na-elekọta nwa elderberry
Ezinụlọ ndị okenye nwere ihe dị ka iri anọ. N'ebe anyị nọ, a na-akụkarị okenye okenye. A na-ele ya anya dịka iche iche, ma e wezụga okenyeberry na agba eji eme ọgwụ. Ezi akuku nke elderberry Ebe ọ bụ na n'oge ochie, a naghị egbochi elderberry, a kụrụ ya n'akụkụ ụlọ ahụ, a kwenyere na elderberry na-eme ihe ọjọọ.
Atụmatụ bara uru banyere ịkụ balsam ime ụlọ
Otu n'ime osisi ndị kachasị ewu ewu n'ime ụlọ, bụ nke e guzobere na windows windows nke ụlọ na ụlọ anyị, bụ balsam (na nke a, otu ụlọ dị iche). Ilekọta ifuru a abụghị ihe siri ike, mana ị ga-achọ ịma otú ị ga-esi gbanwee, gbasaa, mmiri na fatịlaịza ụlọ balsam n'ụlọ.
Otu esi emeso umuaka n'ulo ohia
Onye ọ bụla na-elekọta ubi chọrọ ka ahịhịa ya dị mma, owuwe ihe ubi n'ubi ahụ dịkwa mma. Ma ọ bụrụ na mkpịsị ugodi na-ebi na gị, mgbe ahụ, ha ga-eme ọtụtụ oghere na-akpali ma bibie mkpụrụ niile nke ọrụ gị. Tụlee ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na agbaala ahihia na ubi gị, na otu esi emeso ya. Ọ bụrụ na ị na-amalite ịlụ ọgụ, ọ dị mkpa ịmara ihe ndị dị na ndụ ha.
Ihe ngbochi na ọrịa nke yucca: igbochi, mgbaàmà na ọgwụgwọ
Yucca bụ osisi ọkụ na-ahụ ọkụ nke na-eto na ọnọdụ ndị dị na mmiri na-ekpo ọkụ ma nwee ike ịghọ nnukwu osisi. Ọ dị mfe ibu osisi a n'ụlọ, ma uyuks nwere ọrịa ndị nwere ike imetụta ya, ọ dịkwa mkpa ka onye ọ bụla na-elekọta ubi mara otú e si emeso ha. Ahụike Yucca: mgbochi na ọgwụgwọ Ụlọ osisi Yucca anaghị achọ ihe bara uru nke ala na oge ịme mmiri, n'ihi na ọ bụ ụfe mmiri nke na-ebutekarị ọrịa dị na osisi ahụ.
Nzuzo nke akuku ma na-elekọta snowberry
Na n'okporo ámá, na ogige ma ọ bụ n'ámá ị nwere ike ịhụ obere osisi na-acha ọcha tomato n'ụdị bọọlụ. A na-akpọ osisi a pụrụ iche nke snowberry (Symphoricarpus, Snowfield). O nwere ike ịbụ ihe dị mma e ji achọ ya na mbara ala, na ilekọta ya anaghị achọ nnukwu nsogbu. Nhọrọ nke saịtị maka ịkụ mkpụrụ na-acha snooze. Ọnọdụ na ebe ibute snowberry adịghị mkpa.
Fuchsia bụ osisi na-eto eto nke na-eto eto na Central na South America na New Zealand. Ime fuchsia n'ime ụlọ bụ osisi ngwakọ, nwere ọtụtụ ụdị na ụdị. Azụlitewo ya na omenala maka ihe karịrị afọ 200, ndị na-akụ akwụkwọ osisi na-akpọ ya "Japanese lantern" ma ọ bụ "ballerina". N'okpuru ọnọdụ okike, fuchsia nwere ọdịdị nke osisi ohia nwere alaka nwere ike.
Atụmatụ dị elu maka ịmalite Kislitsy
Oxalis ma ọ bụ oxalis (site na Latin. Oxalis - "utoojoo") bụ nke ụdị mkpụrụ osisi na-eto eto kwa afọ na ezinụlọ Sour. Ọ na-etolite n'èzí, mana ikuku oxygen na-amasịkarị n'ụlọ. Ọ dị mma dị ka ihe ndozi, ọ bụghị naanị okooko osisi mara mma, ma ọ bụ ihe dị iche iche na-enweghị atụ.
Akwukwo anwụrụ na ụlọ: akụkọ ụgha ma ọ bụ eziokwu?
Akwukwo anumanu bu ebe osisi ohia di oke ohia nke ebe ugwu South America. Na Europe, ọ malitere itolite na greenhouses, na -emepụta ọnọdụ ihu igwe dị mkpa. Ma, ọ bụrụ na ị gbalịsie ike, ọ ga-eme ka ọ bụrụ na ị na-etolite etolite. Mgbe obere oge gasịrị osisi a na-adọrọ mmasị ga-eju anyị anya na ọdịdị ya na mkpụrụ ya.
Ụzọ mgbochi nke pesti akara apricot
Akwukwo apricots apuru ihe ndi ozo bu ndi nwere nsogbu na ihu igwe n'oge ha. Otú ọ dị, nke a abụghị ihe niile metụtara mkpụrụ osisi apricot. Ọtụtụ mgbe ha na-arịa ọrịa na ụmụ ahụhụ na-emebi. Otu esi emeso apricots pests, anyi ga-atụle n'isiokwu a.
Portulac: Atụmatụ maka ịkụ na ịchekwa n'ọhịa
Ị na-eche echiche otú ị ga-esi chọọ akwa ifuru gị n'oge opupu ihe ubi! Lezienụ anya na purslane. Osisi nke osisi nwere ihe nkedo-dị ka epupụta, ịmegharị ọnụ, kpuchie ala nke ọma, na agba dịgasị iche (acha ọbara ọbara, ọcha, pink, oroma, odo odo) na-emepụta igwe. Tụkwasị na nke ahụ, osisi anaghị achọ oge iji lekọta ya.
Ụzọ na ụzọ mbuso pests pests
Tupu ị kụrụ strawberries, ọ dị mkpa ka ị mara onwe gị na ihe niile nwere ike iri beri. Nke a ga - enyere aka iji mgbochi rụọ ọrụ nke oma ma na oge ma ga - eme ka ọnụ ọgụgụ kachasị elu. Akọrọ chee echiche banyere ụdị akọrọ nke a pụrụ ịhụ n'ubi ahụ, ihe ndị bụ isi na-ekpebi pesti na strawberries, na ụzọ nke ịchịkwa ha.
Gwa ya: nkọwa, dabara na nlekọta
Naanị ihe na-adịghị ahụ ndị mmadụ na-akọwa ihe ísì ụtọ nke freesia. Ma, oge ọ bụla ha na-enwe mgbagwoju anya. Maka na enweghi okwu ndia. N'okwu ahụ, ọ gaghị ekwe omume ịkụnye ya ihe na-esi ísì ụtọ, ma nkọwa nke ifuru, iwu nke ịkụ na ọtụtụ nuances nke ilekọta ya ga-enyere gị aka ịmalite okooko okooko osisi, na nke a bụ otú o si ele ọrụ anya.
Ụzọ na ụzọ isi merie pests
Carrots bụ biennial (adịkarịghị otu- na perennial) osisi sitere na ezinụlọ ndị ahụ na-ehi ụra, na-etolite n'afọ mbụ nke ndụ a rosette nke akwụkwọ na mgbọrọgwụ, na nke abụọ, mkpụrụ osisi na osisi. A na-ekesa ya gburugburu ụwa, gụnyere n'ala ndị dị na Mediterenian, Africa, Australia. N'ime ugbo, a na-akụkwa carrots ọtụtụ mgbe.